Maxaad uga baahantahay in aad ka oggaato sharciga Maamulka Dakhliga ee uu saxiixay Madaxweyne Farmaajo? – Kalfadhi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa 26-ka bishan Oct saxiixay sharciga Maamulka Dakhliga oo qeyb ka ah dhammeystirka hannaanka Maamul-wanaagga iyo hufnaanta Maaliyadeed ee dalka
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdulkahi Farmaajo oo ka hadlay Munaasbada lagu soo bandhigayey Saxiixa Sharcigan ayaa yiri “Sharcigani waxa uu ku saabsan yahay maamulka dakhliga waana Sharci la jaan-qaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga. Qodobbada uu ka hadlayo sharcigan waxaa ugu muhiimsan bixinta canshuurta iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyaha”.
Madaxweynaha ayaa Golaha Shacabka iyo Guddiga Miisaaniyada, Maaliyadda, Qorshaynta Iyo La Xisaab-tanka Hay’adaha Dowlada Uga Mahadceliyey Dhamaystirka Sharcigan
Sharcigan ayaa soo maray heerar kala duwan islamarkan Guddiga Maaliyada ku bixiyey dadaal fara badan Heerarka uu soo maray sharcigan:-
Sharcigan waxaa Baarlamaanka Federalka Soomaliya la keenay May 2019.
Isla May 2019 waxaa shiray Wasiirada Maaliyadda Dowlad Gobaleedyadda. Waxa ay soo saareen Warsaxaafadeed ay kaga hor imaanayaan sharcigan.
Isla Bishaas Madaxweeynayaasha Dowlad Goboleedka ayaa soo saaray Warsaxaafadeed kale ay ku taageerayaan go’aankii Wasiiradooda.
Guddiga Maaliyadda waxu amray Wasaaradda Maaliyaadda in ay ugu yeeraan dhamaan Dowlad Goboleedyadda kulan looga tashanaayo sharciga si loo helo sharci lo wada dhanyahay.
Wasaaradda way ku guul dareeysatay waxayna Guddiga u sheegeen in Dowlad Goboleedyadda wada tashiga diideen.
Bishii August ayaa Guddigu wuxu warqad martiqaad ah oo looga wadatashanaayo Sharcigan u diray Dowlad Goboleedyadda.
Kadib Guddiga Maaliyada waxay ku dadaaleen in Wasiiradda Maaliyadda Dowlad Goboleedyadda ay ka dhaadhiciyan islamarkana ay ku qanciyeen in ay Guddiga la fadhiistan islamarkan ay kala Shaqeeyna Sharcigan Inkasto Guddiga arintaas uu kala kulmay caqabado oo ay uga horeeyen Dowlad Gobaleedyada kala ah Puntland Iyo Jubbaland balse wadahadal iyo dadaal dheer kadib waxay Ogalaadeen in ay soo dirsadan (Representative)
Sept 7-19 2019 ayaa Guddiga shirkii ugu horeeyay ku qabtay Magaalada Addisababa ee Dalka Ethopia
Waa maxay sababtii uu guddiga shir uu ugu qatay dalka Itoobiya?
Sababta Addisababa Shirkaas Guddiga ugu qabtay waxay ahayd in uu Guddiga kulan la yeesho IMF/World Bank si ay faahfaahin uga siyaan Guddiga Geedi Socodka Deen Cafinta.
25-28 Sept 2019 Guddiga waxay kulankii labaad ee Dowlad Gobaleedyada kula yeeshay Magaalada Garoowe ee Dowlad Gobaledka Puntland
Waxaana lagu heshiinay dhowr qodob oo ah in sharcigan laga bedelo.
Wixii intaas ka dambeeyay Baarlamanka Federalka Soomaliya ayaa akhrinta 2aad iyo 3aad marsiiyey kadib Furitaanka Barlamaanka
Guddiga Maaliyadda ma uu san aadin wax fasax mudadii Baarlamaanka uu xirnaa si ay uga shaqeeyan Shuruucda SMP Benchmark ah
Guddigu waxay soo diyaariyeen :
Sharciga Iibka Qaranka
Guddiga Waxay horay u ansixiyeen PFM iyo Audit bill